Nadaafadley: Xoogsato qadarin mudan!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 27, 2015	0 753 Views
Soo sawiray: Bahda Himilonews.com
Wardhiigleey, Xamar – Dabayaaqada toddobaad kasta, Sahal Baana wuxuu gaari Jente-dieshe ah kusoo galaa laamaha kala duwan ee degmada Wardhiigleey. Wuxuu isa soo taagaa ilinka cid kasta oo macmiil u ah si uu gashinka uga fogeeyo. Bulshada dhexdeeda, tani waa howl aan aad looga tix-gelin ka shaqeynteeda. Hayeeshe, Sahal iyo jaallayaashiisu waxay u arkaan howl muhiimad u leh nafta iyo nolosha.
Dunida ka baxsan Soomaaliya, howsha nadaafadleyda waxaa loo arkaa gunta koobaad ee faya-qabka bulshada. Hayeeshe, Soomaalida dhexdeeda waa howl sahay u ah ceebeyn, liidid iyo meel-ka-dhac. Xittaa ku noolaanshaha dal uskag iyo ur la deris ah, howlaha nadaafadda micno buuran uma lahan Soomaali badan.
Muuna xumida magaalada iyo waddooyinka ay dadku qashinka sidii bullaaccad ugu qubaan, ku noolaanshaha dad sida Soomaaliya oo kala ah, waa xaalad halis ku ah faya-dhowrka nolosha. Hayeeshe, muddo ay Soomaalidu indhahoodu ka abaarsadeen bilic iyo bidhaan qurxoon, dhib weyn uma arkaan halista ka dhalan karta nadaafad-darrida. Ururin dabadeed isla maalintaas, Sahal iyo jaallayaashiisu waxay qashinka u qaadaan meel loogu tala-galay in lagu qubo—deedna lagu gubo.
“Bilowgii anba-qaadka ol’oloha: inta uu qashinku kuu jiro ayuu cudurku kuu jiraa, waxay ahayd howl ka shaqeynteeda bulshada dhexdeeda aan aad loo tix-gelin,” ayuu yiri Sahal Baana, oo 25-jira ahna aabe haysta ubad ay xaas hore u dhashay. “Waa wax lala yaabo sida xirfadani bulshadu ugu dhiirran la’dahay.”
Sahal wuxuu markiisii hore ka shaqeyn jiray laan-tilifoon kahor intaanu kamid noqon shaqaalaha nadaafadda. Ogaanshaha inaanu amaan iyo af-macaani ku heli doonin xirfadan cusub, Sahal waxaa xisaabta ugu darsaneyd oo qura inuu bulshada ka noqon doono tuke-baalcadda ah. Hayeeshe, muddo uu howshani ku dhex-dabaashay ararteeda, haddda in badan uma dhutiyo tumaatida lagu soo tuuro. “Waa caadi. Waayo iyada ayaa iiga dhigan howl guud,” ayuu yiri. “Waana ku faraxsanhay wixii aan ka kasbado,” ayuu sii raaciyay Sahal isaga oo tilmaamay in kahor intaanay bulshadu ku magac-dhebin xirfadiisa uu isagu isula baxay “Qashinle.”
Dib-ugu soo baxa magaalada xilliga casiryaha isaga oo labisan, Sahal wuxuu tusaale cusub u noqday in howsha iyo hufnaantu ay isku hadaf yihiin—kasabkuna uusan ahayn wax la isku ceebeeyo.
Inkasta oo howsha ay hayaan Sahal iyo jaallayaashiisu ay saameyn isa-soo taraysa ku yeelatay bilicda magaalada, howshoodu uma muuqato mid si guud bulshada looga soo dhaweeyey. Dal dadkiisu dabeecadda hal-adaygnimo iyo hab-dhaqanka aan ku dhisneyd “Mahadsanid” uu wax caadi ah ka yahay dhexdiisa, howsha nuucaan oo kala ah waxay u baahan dulqaad iyo dabacsani. Hayeeshe, tani laxaw iyo lurba kuma hayso Sahal iyo jaallayaashiisa. “Waxaad u shaqaynaysaa badi waa caruur iyo haween,” ayuu yiri Sahal isaga oo tilmaamaya dhibaatooyinka ay sida maalin-laha ah ugala kulmaan bulshadooda. “Marka waa muhiim dulqaad iyo dabacsani.”
Taniyo 2011, shirkado dhowr ah oo ku howlan bilicda iyo nadaafadda ayaa Muqdisho laga hir-galiyay. Shirkadahan ayaa bishiiba 150. Sh. Som. ah ka qaada qoyska kasta oo macmiil u noqda. Shirkadahan ayaa leh gawaari ay kaga daabulaan qashinka guud ahaan xaafadaha ay ka shaqeeyaan. Nagaad,Nabad, Deegaan iyo Green-life ayaa kamid ah shirkadaha ku howlan howlaha nadaafadda.
Aqoonyahannada ku xeel-dheer culuumta deegaanka ayaa sheegay in howlahan looga gol-leeyahay in lagu soo celiyo bilicda iyo hufnaanta dalka, ay bilow wanaagsan u yihiin faya-dhowr samaada iyo faras-magaale qurxoonaada.
“80-meeyadii Muqdisho waxay noqotay mid kamid ah magaalooyinka ugu nabadda iyo nadaafadda qurxoon Afrikada hodanka ah,” ayuu yiri Xasan-kafi Cali, oo ah aqoon-yahan cilmiga bulshada ku xeel-dheer. “Heerkaas aynu mar hiigsanay meel kasii dheer ayaynu hiigsan karnaa,” ayuu sii raaciyay Xasan-kafi isaga oo ifafaalo wanaagsan ka muujiyay in howlahani nadaafadeynta deegaanka ah ay bulshadu si guud ugu baraarugi doonto. Balse wali cudurrada ka dhasha nadaafad-darri waxay halis ku tahay Soomaali badan.
Ummadda Soomaaliyeed waa indha-ku-garaadlayaal. Mar kasta oo kaamiradda Himilonews.com qabanaysay shaqaalaha howlaha nadaafadda, waa bulshada kuwa hilow muuqda ka bixinayay shaqadooda. Waaana isla bulshada kuwa looga fadhiyo inay Soomaaliya ka qaadaan halka liidata ee ay kaga jirto bilicda dunida—dibna ugu celin kara booska koobaad ee nadaafadda dunida.
Balse taasi waa mustaqbalka dheer. Inta laga hiigsanayo hankaas, Soomaali badan waxay la cuyuubsanaan doonaan qashinka iyo wasaqda. Halka shaqaale uu kamid yahay Sahal iyo jaallayaashiisuna ay bulshada ka dhowrayaan cod mideysan oo dhiirri-gelin u noqda howlahooda.
“Markasta oo aan qashin ka ag qaado guri Soomaaliyeed, waxaan dareemaa shucuur diimeed iyo mid wadaniyadeed,” ayuu yiri wade kamida gaadiidka nadaafadda.
“Waayo waxaan isku heystaa inaan ahay hindisaha caafimaadka bulshada.”
Next: Baalashley: Da’yar–Raran iyo Rajo u dhaxeysa.